Mmemme 10 nke ehihie
CHANCHARH (1NT) - SHIMLA (2NTS) - MANALI (3NTS) - DHARAMSHALA (1NT) - DALHOUSIE (2NTS) - AMRITSAR (1NT) - CHANDIGARH
| 150 njegharị
Mgbe ị bịarutere Chandigarh ọdụ ụgbọ elu / ọdụ ụgbọ okporo ígwè, bulie & ụgbọala gaa Shimla. Shimla, bụ isi obodo okpomọkụ nke British India, na-eguzo n'etiti Ugwu Shivalik snowcapped, na-enye ụfọdụ n'ime echiche kachasị mma banyere ndị Himalayas dị ike. Mgbe ị bịarutere Shimla nbanye na họtel ahụ. (N'abalị na Shimla)
N'ụbọchị a mgbe nri ụtụtụ gasịrị maka nlegharị anya na na Shimla ma gaa na Kufri. N'elu mita 2,622 dị elu, a maara Kufri maka ụzọ ụkwụ na ụkwụ na-agba ụkwụ, na ebe ndị snow na-ekpuchi maka ịkwa ahụ na tobogganing. N'ehihie, na-aga njem nlegharị anya nke Shimla, gaa na ugwu ugwu jakoo nke na-enye obodo dị iche iche, Vice Regal Lodge ma ọ bụ na-aga n'okporo ụzọ. (N'abalị na Shimla)
Kwa ụtụtụ mgbe ụtụtụ gụchara ma chọga Manali. Enroute na-agbanye ese foto gị, na-ese foto nke ebe ndị mara mma dịka osimiri mmiri, ndagwurugwu kululu, Dashehra nwa na ibe. Manali bụ ebe a na-ekpochapụ elu ugwu nke 1,929 nke dị n'etiti oké nkume snowcapped, ọmarịcha nke Manali na mmiri ya dị mma, na-agafe obodo ahụ. Ndị niile nọ na-ahụ osisi deodar na osisi pine, obere ala na ubi mkpụrụ osisi. Nri ehihie maka ihe omume nke onye ọ bụla. (N'abalị na Manali).
N'ụbọchị a mgbe nri ụtụtụ gasịrị maka njem nlegharị anya nke Manali, gaa na 450 afọ nke ụlọ nsọ raara nye Hadimba Devi, nke gosipụtara ụfọdụ osisi ịcha mma. Gaa na Ụlọ Manu na Vashisht Kund, nke a maara maka sọlfọ na-ekpo ọkụ. Achịcha abalị maka ịzụ ahịa na Market Tibet. (N'abalị na Manali).
N'ụbọchị a mgbe ụtụtụ ụtụtụ gasịrị maka Snow Point na okporo ụzọ Rohatang. Enoute kwụsịrị na Solang vallwy. Ógbè Rohtang (eletrik 3940) bụ 51 kms si Manali, ma n'ihi nnukwu snow kpuchiri ụzọ, ọpụpụ a anaghị anabata ya maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnwa 8 n'afọ. Achịchị na-abịa na Manali na oge n'efu maka ememe ntụrụndụ nke onye ọ bụla. Ọ bụrụ na emechie okporo ụzọ Rohtang Pass, gaa na Snow Point (a ga - akwụ ụgwọ maka ịnyịnya / ịnyịnya). N'abalị na Manali.
DAY 06: MANALI DHARAMSHALA
N'ebe dị anya site na 260 kilomita na-akwụsị na Baijnath mara ya na Shiva Temple na ọzọ na Palampur ama maka ubi Tii. Dharamhsala bụ ebe dị elu nke dị n'elu ugwu Dhauladhar banyere 18 kms n'ebe ugwu ọwụwa anyanwụ nke Kangra, ama mara maka ịma mma ya mara mma n'etiti osisi pine na osisi oak. Ebe ọ bụ na 1960, mgbe ọ ghọrọ isi ụlọ ọrụ na-adịru nwa oge nke ịdị nsọ ya Dalai Lama, Dharamshala amalitewo ịkọ mba dịka "Little Lhasa na India". O / N Ụlọ nkwari akụ
Mgbe nri ụtụtụ si Dharamshala kwupụta Dalhousie mgbe ọ na-eme njem nlegharị anya nke ebe ndị gụnyere, ịdị nsọ Ya Dalai lama obibi na Mc Leodgunj, Ncheta nche, Bhagsunath temple na Dal Lake. Gaa Dalhousie na mgbede. O / N Ụlọ nkwari akụ
A na - akpọ aha Dalhousie mgbe onye ọchịchị Gọvanọ Britain - General nke narị afọ nke iri na otu, Lord Dalhousie. Gburugburu osisi dịgasị iche iche - osisi, akpa, oaks na okooko rhododendron. Dalhousie na-elegharị anya na mpaghara nleta na Panjipula, Subhash Baoli na njem na Khajjiar 9 kilomita si Dalhousie nke oké ọhịa Deodar gbara gburugburu. Ịga site Dalhousie ruo Khajjiar dị egwu. O / N Ụlọ nkwari akụ
Mgbe nri ụtụtụ, lelee site na nkwari akụ ma wega Amritsar. Mgbe e mesịrị, ịga leta Golden Temple, Jalyanwala Bagh & Waga. N'abalị na Amritsar.
Kwa ụbọchị mgbe ụtụtụ gwụchara ma chọga Chnadigarh. Mgbe ị bịarutere Chandigarh nyefee maka nlele gị. N'abalị na Chandigarh.
N'ụbọchị a mgbe ụtụtụ gasịrị, chcek si na nkwari akụ wee gaa maka nlegharị anya na Chandigarh. Gaa na Nkume Ugwu. Ọnụ ụzọ na-enweghị atụ na-eduga ná ndokwa dị ịtụnanya, nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke a na-atụghị anya ya na nkume, nkume nkume, kpụfuru Chinaware, akpaghasị ọkpụkpụ ndị na-eme ka ọ dị mma, gbajie ma tụfuo nchara iko, ụlọ mkpofu, coal na ụrọ-niile juxtaposed ịmepụta ụwa ndị nrọ nke ụlọ eze, enwe, ndụ obodo, ndị inyom na ụlọ nsọ. E mesịa nyefee ọdụ ụgbọ elu Chandigarh / ọdụ ụgbọ okporo ígwè ebe njem ahụ ga-agwụ.